I-china Mincing Submersible Sewage Pump abakhiqizi nabaphakeli | IKAIQUAN
Ukugeleza: 10-320m3 / h
Inhloko: Kuze kufike ku-34m
PH Inani: 4 ~ 9
Iphampu ayikwazi ukusetshenziselwa imithombo yezinhlayiya ezonakalisayo nezikhulu kakhulu.
Ukugaya Izinzuzo Zempompo Yendle Engaphansi
1.I-module yokusika ezimele, umsebenzi omuhle wokusika, akulula ukuvimba. Inqobo nje uma ingafakwa ethekwini lokumunca, ingaqunywa kalula. Ukuhambisa amanzi angcolile amancane, amathangi we-septic, indle yasesibhedlela neminye imithombo yezindaba equkethe imicu emide futhi emincane. Izinhlayiya ezinkulu azikwazi ukuhanjiswa. Umsebenzi wokugaya ungavimbela ipompo nepayipi ekuvinjelweni imfucumfucu endle. Kodwa-ke, ukuze kuqinisekiswe kangcono ukuthembeka kokusebenza kwepompo, kunconywa ukufaka insimbi evimba ukungcola emvelweni ongaphandle kwaphakathi.
2. Isigaba sokuzisika senziwe ngensimbi engagqwali futhi sesithole ukwelashwa kokushisa. Ikhaba linobulukhuni obanele futhi lingagcina ikhono lokusika eliqinile isikhathi eside. Uma amandla okugawula ancipha isikhathi eside, imodyuli yokusika ingashintshwa ngokuhlukile.
3. Kokubili ohlangothini lwepompo nohlangothi lwezimoto kuhlome ngezimpawu zemishini ukufeza ukuvikeleka kwesembozo sesembozo sokucwilisa esingaphansi esithembekile semoto. Amafutha asekamelweni likawoyela agcoba ngokugcwele futhi apholise uphawu lwemishini.
Langaphambilini I-KQSN Split Case Pump
Olandelayo: I-Axial engaphansi, Impompo Yokugeleza Ehlanganisiwe
Ukugaya Umdwebo Wokwakheka Kwamapayipi Angaphansi Kwamanzi
Ukugaya Umdwebo Wemboni Yendle Ephansi Engaphansi Yencazelo kanye Nencazelo